घरैमा बसी पेडा कसरी बनाउने ? (भिडियोसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
घरैमा बसी पेडा कसरी बनाउने ? (भिडियोसहित)
दैनिकजसो पूजाअाजा गर्न पेडा पनि विशेष चढाउने गरिन्छ । मानिसहरु जुनसुकै बेलामा पनि पेडा खान मनपराउँछन् । सबैलार्इ कौतुहल पनि लाग्न सक्छ कि पेडा घरैमा बसीबसी कसरी बनाउने होला भनेर ? हेरौं तलको भिडियो र बनाउने तरिका सिकौं ।